Ingabe Ukukhangisa Komkhiqizo Kuyasebenza? | Martech Zone
Ingabe ukukhangisa ngomkhiqizo kuyasebenza? ULab42 ubuze lokho nje wahlanganisa le infographic nemiphumela.
Sinqume ukubheka ukuthi abathengi bazibheka kanjani izimangalo zokukhangisa, futhi imibono yabo yadweba isithombe esithandekayo. Bangu-3% kuphela abangachaza izimangalo ezikhangisweni njengezinembe kakhulu, futhi ama-21% kuphela angachaza izikhangiso njengezilungile ngandlela thile. Sithole ukuthi iziphi izingxenye zezikhangiso abangazikholelwa- cishe zonke zikhombe ku-Photoshop njengengxenye yenkohliso yokukhangisa. Bheka ifayela le- infographic engezansi kusuka kuLab42 ngokuqonda kokubona kwesikhangiso, ukubona komkhiqizo, futhi uma izikhangiso zomkhiqizo zisebenza ngempela.
Bakholelwe noma cha, noma ngabe ukukhangisa komkhiqizo okungabazekayo kuyasebenza noma cha kuphendulwa ekugcineni ukuthi abathengi bathenga lokho noma cha. Ngingabuka umkhangiso othi ngingawuphinda kabili umkhondo wami bese ngithenga ngaphandle kokulindela ukuthi empeleni bazowuthola double. Mhlawumbe, lapho ngifunda lesi sikhangiso, ngikholelwa nje ukuthi leli qhinga linengqondo futhi lifanele ukuhlolwa. Ngamafuphi, umbono wami wesikhangiso kungenzeka ukuthi wawungemuhle, kepha ngisengathenga.
Vele angikhuthazi amanga okuthengisa izikhangiso zakho ngawo. Kodwa-ke, ukukhomba izibalo ezithile ezinhle, umklomelo, umphumela ohlukile ovela kwiklayenti unganele ukubamba ukunaka kothile. Kulindelwe ukuthi uzibekele neklayenti lakho okusemqoka!
Tags: ukuqonda kwesikhangisoumbono wokukhangisaukukhangisa ngomkhiqizoinfographicilebhu 42Lab42umbono
I-iPad: Abafundi beMartech Bathola Izinyanga Ezi-3 Mahhala zeMagazini Yokuthengisa .bizMarketing
Jan 6, 2013 ngo-3: 51 PM
Ngiyayithanda into 'okumele isikhangiso siyenze' ingifundise, ingenze ngazi ngemikhiqizo futhi ihlobene nami…. akukho lapho ithi ngithengisele khona!